Date My Pet » 5 Dog Friendly Hevitra Fa A First Date
5 Dog Friendly Hevitra Fa A First Date
Last nohavaozina: Dec. 11 2019 | 2 min namaky
Raha ny hevitra ny daty voalohany feno lava, hafahafa ho nijanona kely sy ny resaka izay intsony vao manomboka tsy mahaliana anao, Diniho avy eo manomana ny voalohany izay ahitana ny daty sy ny daty ny alika. Mitondra ny alika dia afaka hitandrina ny hafahafa mampangina amin'ny helodrano sy hanome anao ny anatiny samy mandinika ny toetrany. Fa aiza no tokony handeha? Diniho ireo alika-namana dimy daty hevitra.
Hisakafo amin'ny alika-namana trano fisakafoanana: Grabbing sakafo hariva tao amin'ny toeram-pisakafoanana tsara dia efa tonta hevitra ny daty voalohany. Koa nahoana no tsy ampiana ny manova azy io amin'ny alalan'ny nisakafo amin'ny alika-namana trano fisakafoanana? Mba hahitana ny alika-namana fisakafoanana ao amin'ny faritra misy, mampiasa ny toerana tena fikarohana na manontany ny toerana tena alika Boutique fivarotana ho an'ny soso-kevitra.
Manatrika ny fampisehoana an-kalamanjana: Na dia ny mandihy amin'ny fonony tarika hilalao ny Hits ny famatoran'ny malaza na mihaino ny efi-trano mozika kilasika orkesitra milalao, manatrika fampisehoana an-kalamanjana amin'ny daty voalohany dia fomba lehibe mba hampidirana ny alika. Raha azo atao, mitondra harona hitsangatsangana sy ahitana alika-namana sasany no itondran'i, koa. No ataovy azo antoka ny fampisehoana mamela toerana alika; tsy te ho tonga amin'ny pooches ho fantatra fotsiny dia tsy afaka manatrika.
Explore ny tanàna an-tongotra: Raha toa ka manaiky hiara ny andro, Diniho avy eo ny fihaonana miaraka ny alika amin'ny olona ambony sy nanan-tantara manadihady ny faritra. Dia ny aina mandeha fomba hahafantatra ny hafa mandritra ny alika koa ny manome ny fanatanjahan-tena. Aza hadinoina ny poop kitapo!
Hihaona amin'ny zaridainam-panjakana ny alika: Fa ny fitenenana mahazatra sy haingana daty voalohany, soso-kevitra ny fihaonana amin'ny alika tao amin'ny zaridaina alika an-toerana. Ianao sy ny alika fanatanjahan-tena raha afaka mahazo milalao ny lalao ny trondro. Fihaonana amin'ny zaridaina alika mitandrina ny daty aina, koa; raha namely izany eny, Manoro hevitra afaka loha ho an'ny sakafo hariva, fa raha tsy marina pitik'afo manidina, afaka lohan'ny an-trano fotsiny. Hatrany amin'ny tavoahangy ny rano ao amin'ny tanana ho anao sy ny alika, ary angamba ny nitondran'i sasany ho an'ny alika. Alohan'ny haka izany leash, aza, jereo aloha mba hijery raha toa ny alika zaridaina dia mitaky fahazoan-dalana manokana na ny mari-pamantarana ny, na raha toa ka mila mandoa sarany mialoha.
Manatrika ny alika toeram-pitsaboana: Na ny iray kilasy amin'ny toro-hevitra amin'ny taovolo na kilasy mendrika amin'ny alika, manatrika ny alika-mifantoka amin'ny toeram-pitsaboana ny daty no fomba lehibe ny hahafantatra tsirairay amin'ny aina sy mampahazo aina toerana. Mba hahitana ny alika toeram-pitsaboana ao amin'ny faritra misy, dia afaka manomboka amin'ny alalan'ny fikarohana ny biby eo an-toerana fialofana na fivarotana alika manokana.
Rehefa mieritreritra ny daty voalohany amin'ny olona iray manokana sy ny alika, ho azo antoka faly miaraka nitondra ny canine miaraka. Alika sasany mety tsy ho araka eo amin'ny vahoaka, na amin'ny hafa alika.
12 Soso-kevitra ny hijanona Upbeat Rehefa Online Dating